Ndiya skoko - Коса - Английский Переводы и примеры
Вы искали: ndiya skoko (Коса - Английский)
Kodwa Abayazi Ndiya Xoka
Ndiya kuvuma kuYehova, Ngokuba endiphethe kakuhle.
Ndiya kuphendula nam okwam, Ndixele ukwazi kwam nam.
Ndiya kuba seWentworth ngoMgqibelo kunye nogogo ngenxa yokuhamba
I shall be at Wentworth on Saturday with my grandmother for the sake of go
UYehova ungakum ngokundinceda; Ndiya kubona mna kwabandithiyayo.
Vukani, mrhubhe nohadi; Ndiya kusiphangela isifingo.
Khawuphulaphule, ndithethe mna; Ndiya kubuza kuwe, undazise.
Khawuzibhinqise amanqe akho njengomfo; Ndiya kukubuza, undazise.
Ndiya kubongoza ngentliziyo yonke, Ndibabale ngokwentetho yakho.
kostenvorteil (Немецкий>Португальский)content provider (Английский>Латышский)방향성 (Корейский>Английский)mistenkelige (Норвежский>Английский)privat personkorsel (Датский>Итальянский)xe m phim loan luan nhat ban (Вьетнамский>Английский)groupen (Голландский>Немецкий)eurobankbiljetten (Голландский>Болгарский)budgethouder (Голландский>Английский)life hack (Английский>Греческий)wag kang manggulo (Тагальский>Английский)in the hopes (Английский>Тагальский)marktplaats (Голландский>Английский)cilindro (Итальянский>Немецкий)el sillon es menos grande que el sofa (Испанский>Английский)ladanum (Норвежский>Коса)rückstreuelektronendetektors (Немецкий>Английский)borang permohonan vdr pekerja asing baru (Малайский>Английский)pressurised (Английский>Словенский)marathi essay on vachanache mahatva in marathi (Английский>Хинди)kamus terjemahan bahasa latin (Индонезийский>Латинский)there was nothing random about it (Английский>Русский)anestetico (Итальянский>Английский)primus in indis (Латинский>Английский)eichgerät (Немецкий>Французский)